Horudhac: Real Madrid vs Huesca … (Los Blancos oo doonaysa inay gaarto guulo xiriir ah horyaalka La Liga) – Gool FM
(Madrid) 31 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa indhaha ku haysa inay guulo xiriir ah gaarto horyaalka La Ligaha Spain, iyagoo sii wadi doona ciyaartistooda kal ciyaareedkan 2020-21 marka ay garoonkooda galabta ku qaabilayaan naadiga Huesca.
Los Blancos ayaa saddex dhibcood ka heshay Barcelona kulankii El Clasico ee isbuucii hore, waxaana ay haatan ku jiraan kaalinta labaad ee kala horreynta horyaalka.
Dhinaca kale Huesca inkastoo weli aysan guuleysan xilli ciyaareedkaan haddana waxa ay fadhisaa kaalinta 18-aad ee kala horreynta horyaalka La Liga.
Dani Carvajal iyo Nacho ayaa labaduba garoomada kaga maqnaan doona sababo dhaawac illaa December iyo November sida ay u kala horreeyaan.
Ferland Mendy ayaa laga yaabaa inuu ka soo muuqdo daafaca midig ee kooxda martida loo yahay, iyadoo Lucas Vazquez la filayo inuu fursado dheeri ah ka helo garabka midig ka hor ciyaaryahanka reer France.
Isco waa inuu ka soo muuqdo isku shaandheynta lagu sameyn karo khadka dhexe, halka Eden Hazard laga yaabo inuu ku bilowdo kulan dhif ah kaddib markii uu dhawaan ka soo kabsaday dhaawac kale.
Mikel Rico ayaa shaki ku jiraa sababo la xiriira soo kabashadiisa joogtada ah ee Korona Fayras, laakiin wuxuu taam u noqon karaa inuu ku soo laabto khadka dhexe isbuucaan.
Pedro Mosquera waa inuu sii haystaa booskiisa kooxda kaddib qaab ciyaareed aad u fiican uu soo maray, inkastoo Huesca ay guuldarro weyn ka soo gaartay Real Sociedad.
Sandro iyo Rafa Mir waa inay ka soo muuqdaan safka hore ee kooxda martida ah.
>- Kooxda SD Huesca ayaa ku guuldarreysatay inay guul gaartao 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda ama ay marti ahaayeen.
>- Kooxda Real Madrid ayaan la garaacin 16 ka mid ah 17-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.